आजबाट विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र पाउन सकिने, कसरी लिने सेवा ? « Khoj Raftar
आजबाट विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र पाउन सकिने, कसरी लिने सेवा ?
२१ साउन,काठमाडौं – सरकारले अनलाइनबाट पनि विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट उपलब्ध हुने क्यूआर कोडसहितको विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न अनलाइनमा गएर मागिएको विवरण भरेर आवश्यक कामगजात अपलोड गर्नु पर्नेछ ।
आजबाट यो सेवा सुरु भएको विभागले जनाएको छ । https://vaccine.mohp.gov.np/public-request-form
मा गएर मागिएको विवरण अपलोड गर्नुपर्ने छ ।
अनलाइन सेवा लिन नसक्नेहरुका लागि आजदेखि (बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म शनिबार समेत) राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, कीर्तिपुरमा गएर सेवा लिन सकिने छ ।
आवश्यक कागजात ः
सक्कल राहदानी, सक्कल खोप कार्ड, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइज फोटो, राहदानीको छाया कपी, खोप कार्डको छाया कापी, कबुलियतनामा https://vaccine.mohp.gov.np/public-request-form यो अनलाइनबाट डाउनलोड गर्न सकिने छ भने फारम भर्ने स्थानमा पनि उपलब्ध हुनेछ ।
तीनदिनभित्र विदेश जानेहरुका लागि थप कागजातहरु भिसाको छाया कपी, टिकटको छाया कपी पेश गर्नुपर्ने छ ।
यसैबीच, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र अबदेखि जिल्ला अस्पतालबाटै पाइने भएको छ । विदेश जाने व्यक्ति तथा विद्यार्थी सबैलाई काठमाडौंमै आएर खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन सकस भएपछि सरकारले सबै जिल्लाबाट प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको हो ।
बुधबार स्वास्थ्य सेवा विभागले ७७ वटै जिल्ला अस्पताललाई पत्र पठाएर त्यहीँबाट खोप लगाएको प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७८ साउन २१ गते बिहिवार
खोज रफ्तार मा आफ्नो सल्ला,सुझाव,विचार,समाचार,विज्ञापन पठाउन चाहानुहुन्छ भने khoj[email protected] मा ईमेल गर्नुहोला । हामीसँग तपाईं फेसबुक ,ट्विटर,युट्युब मा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
दाङमा आज थप ३४ जनामा कोरोना, ३९ जना निको
आज दाङमा ८८ जना संक्रमित थपिए, १५ जना निको
सोमबार दाङका १२४ जनामा कोरोना पुष्टि, १८ जना निको
दाङमा आज ६७ जना कोरोना मुुक्त, ५ जना संक्रमित थपिए